स्वास्थ्य – SidhaRekha
२०७५ आश्विन १, सोमबार १३:०३२०७५ आश्विन १, सोमबार १३:०३२०७५ आश्विन १, सोमबार १३:०३ by Sidharekha Online
बैतडी । दोगडाकेदार २ कफलकोटका २७ वर्षीय जयबहादुर महरा एकवर्षदेखि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचाररत् छन् । एक वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारका लागि दुबई पुगेका महरा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि नेपाल फर्किएका थिए । सरकारले मृगौलाका बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेपनि यो उपचार सर्वसाधारणका लागि उत्तिकै महंगो सावित भएको छ । परिवारको जेठो छोरा एक वर्षदेखि बिस्तारा परे पछि महरा परिवारमा बिचल्ली छाएको छ । छोराको उपचारका लागि भएको सम्पति बेचेर महरा परिवार काठमाडौंमा डेरा लिएर बसेका छन् । अहिले जन्मजात एउटा मृगौला लिएर जन्मिएका जयबहादुरको स्वास्थ्य झन, झन कमजोर हुँदै गएको छ । शरिरमा सेता रक्तकोषको मात्रा कम भएपछि सरेको पहिलो र दोस्रो अपरेसन मृगौला प्रत्यारोपण को मिति, तेस्रो पटक उनलाई टिबीको संक्रमण भएपछि स¥यो । अहिले उनले हप्तामा तीन पटक डाइलेसिस गर्दै टिबीको औषधी लिइरहेका छन् । छोरो
२०७५ श्रावण २५, शुक्रबार १३:५९२०७५ श्रावण २५, शुक्रबार १३:५९२०७५ श्रावण २५, शुक्रबार १३:५९ by Sidharekha Online
काठमाडौं । उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा डाक्टरको लापरवाही भएको भन्दै नेपालका धेरै अस्पतालमा हुलदंगा र तोडफोड हुने गरेको छ । यस्ता विवादहरु धेरैजसो अस्पताल प्रशासनसँगको सहमतिमा टुंगिने गरेका छन् । मिलेमतोमा घटना सामसुम पारिँदा डाक्टरको लापरवाही हो वा होइन भन्नेसमेत थाहा हुँदैन । तर, अब भदौ १ देखि नयाँ मुलुकी संहिता आएपछि भने डाक्टरहरुले जेल जानुपर्ने हुन सक्छ । उपचारमा लापरवाही गर्ने डाक्टरलाई कारबाहीको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा अहिलेसम्म यस्ता घटनामा चिकित्सकहरुमाथि कुनै कारवाही भएको छैन । तर, अब भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा डाक्टरको लापरवाहीले विरामीको मृत्यु भएको पुष्टि भएमा त्यस्ता डाक्टरलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको इलाजसम्बन्धी कसुरको दफा २३२ मा लापरवाही वा हेलचेक्र्याइ गरी इलाज गर्न नहुने उल्ले
२०७५ असार ३१, आईतवार १९:२६२०७५ असार ३१, आईतवार १९:२६२०७५ असार ३१, आईतवार १९:२६ by Sidharekha Online
पन्चेश्वर गाउपालिकाको वडा नं २ पूर्ण संस्थागत सुत्केरी घोषणा
बैतडी । जिल्लाको पन्चेश्वर गाउपालिका वडा नम्बर २ पूर्णसंस्थागत सुत्केरी वडा घोषणा गरिएको छ। सबै मापदण्ड पूरा भएपछि वडा नं २ लाई पूर्णसंस्थागत सुत्केरी गाविस घोषणा गरिएको हो। वडाभरि रहेका गर्भवती महिलाले गत एक वर्ष यता स्वास्थ्य संस्थामै बच्चा जन्माएपछि पूर्णसंस्थागत सुत्केरी वडा घोषणा गरिएको पन्चेश्वर गाउपालिकाका वडा न २ का अध्यक्ष दशरथ मङगोलाले बताउनुभयो । वडामा स्थलगत अध्ययन गरि सोही अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ‘जिरो होम डेलिभरी’ वडा भएको पाइएपछि आज एक औपचारिक कार्यक्रमका बिच घोषणा गरी वडालाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । गर्भवती महिलाले नेपाल सरकारको प्रोटोकल अनुसार चार पटक गर्भजाँच गरेको, गर्भवती महिलाले टिडी खोप, आइरन चक्की सेवन गरेको, स्वास्थ्यसंस्थामा नै बच्चा जन्माएको लगायतका ८ वटा सूचक पूरा भएपछि वडालाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी वडा घोषणा गरिएको हो।
२०७५ असार २७, बुधबार २१:३७२०७५ असार २७, बुधबार २१:३७२०७५ असार २७, बुधबार २१:३७ by Sidharekha Online
शंकरपुर स्वास्थ्य चौकी किशोर किशोरी मैत्री
बैतडी । बैतडीको सुर्नया गाउँपालीकाको एक स्वास्थ्य चौकीलाई किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था प्रमाणीकरण गरीएको छ । आज एक कार्यक्रमका बिच गाउँपालीकाको शंकरपुर स्वास्थ्य चौकीलाई किशोर किशोरी मैत्री प्रमाणीकरण गरीएको हो । किशोर किशोरी मैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धी तथा प्रमाणीकरण सामाग्री २०७२ अनुसार ९ वटा मापदण्ड र ४५ वटा राष्ट्रिय आधारहरु मध्ये ४२ आधारहरु पुरा गरेकोले उक्त स्वास्थ्य चौकीलाई किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था प्रमाणीकरण गरीएको हो । किशोर किशोरी मैत्री प्रमाणीकरण हुनको लागी पुग्नुपर्ने मापदण्डको ९४.९ प्रतिशत अंक यो स्वास्थ्य संस्थाले प्राप्त गरेको छ । परिवार स्वास्थ्य महासाखाका कार्यक्रम अधिकृत विद्या डिसीले स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन तथा संञ्चालन समितीका अध्यक्ष जय बहादुर कुवँर र स्वास्थ्य चौकी ईन्चाज प्रकाश थापालाई किशोर किशोरी मैत्री
२०७५ असार १८, सोमबार १९:११२०७५ असार १८, सोमबार १९:११२०७५ असार १८, सोमबार १९:११ by Sidharekha Online
टाइफाइड, यसका लक्षण र बच्ने उपाय
बाल्यवस्थामा लगभग हामी सबैजसोले एकपटक टाइफाइड रोगको अनुभव गरेका हुन्छौँ । अङ्ग्रेजीमा टाइफाइड शब्दको अर्थ ‘टाइफसजस्तै लाग्ने’ भन्ने हुन्छ। यो रोग लागेको बेलामा टाइफस रोगको लक्षणहरू जस्तै लक्षणहरू देखापर्ने भएकोले यसलाई टाइफाइड नामाकरण गरिएको हो । टाइफाइडलाई म्यादी ज्वरो तथा आन्तरिक ज्वरोको नामले पनि चिनिन्छ । यो ज्वरो साल्मोनेला टाइफी (मुख्य) र पाराटाइफी ‘ए’, ‘बी’ तथा ‘सी’ प्रजातिका ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमणका कारणले आउने गर्दछ । तुलनात्मकरूपमा एशियामा टाइफाइडका बिरामी बढी हुने गर्छन् । त्यसपछि अफ्रीकी मुलुकहरू दोस्रो नम्बरमा आउँछन् । एशियन मुलुकहरू जस्तै बंगलादेश, चीन, नेपाल, इन्डिया, इंडोनेशिया, लाओस, भियतनाम आदिले ८०५ रोग ओगट्छन् । असार, साउन र भदौ अर्थात् वर्षायाममा यो रोगको सङ्क्रमण बढ्दछ । दूषित पानी, खानाका माध्यमबाट सर्ने यो रोग मानिसको व्यक्तिगत सरसफाइ तथा वातावरणीय सरसफाइसँग प्र
२०७५ जेष्ठ २८, सोमबार २०:०७२०७५ जेष्ठ २८, सोमबार २०:०७२०७५ जेष्ठ २८, सोमबार २०:०७ by Sidharekha Online
डा. प्रकाश तिमिल्सेना हरेक वर्षझै यसपालि पनि गर्मी मौसमबाट बिरामी परेका सर्वसाधारणहरु अस्पतालमा आउन सुरु भइसकेको छ ।दिनप्रतिदिन बिरामीहरुको चाप बढ्दै गएको छ । हरेक स्वास्थ्य संस्थामा गएर हेर्ने हो भने त्यो देख्न पाइन्छ । यो क्रम अझै बढ्ने निश्चित छ । जति गर्मी बढ्यो उति बिरामीको चाप बढ्ने गरेको छ । केही हप्तामात्र पर्खिने हो भने अस्पतालका कोलियाहरुमा समेत बिरामीलाई राखेर उपचार गर्नुपने अबस्था आउछ । यो मौसममा ज्वरो, झाडापखलाको समस्या भईरहन्छ । त्यस्ता बिरामीहरु धेरै आउछन् । यस्ता बिरामीहरुलाई सामान्य उपचार पछि पनि घर पठाईन्छ । सामान्य स्वास्थ्यसंस्थामा गएर उपचार गर्न पनि सकिन्छ । तर यी बाहेक गर्मीयाममा सबैभन्दा धेरै हुने अन्य जटिल खालका रोग भनेको मलेरिया, कालाज्वार, टाईफाईड, जन्डिस आदि रोगहरु हुन । यो मौसममा हुने अधिकांस रोगहरु सरुवा हुने गर्छन, सामान्य सजगता नअपनाउने हो भने प्र
२०७५ जेष्ठ २७, आईतवार १६:३४२०७५ जेष्ठ २७, आईतवार १६:३४२०७५ जेष्ठ २७, आईतवार १६:३४ by Sidharekha Online
गाउँमै निःशुल्क उपचार पाउँदा स्थानीय खुसी
मोहन चन्द, बैतडी । बैतडीका बिभिन्न स्थानीय तहमा निःशुल्क स्वस्थ्य शिविर संचालन गरिएको छ । जिल्लाका १० स्थानीय तह मध्ये एक नगरपालिका र तिन गाँउपालिकामा विशेषज्ञ डाक्टरहरुले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेका हुन् । आफ्नै गाउँघरमा विशेषज्ञ डाक्टरहरुबाट उपचार गराई निःशुल्क औषधि पाएकोमा स्थानीय खुसि भएका थिए । ‘म वुढो मान्छे मलाई कोले अस्पताल ल्याएर उपचार गराउथ्यो गाउँमै डाक्टर आएका रहेछन कानको निशुल्क उपचार गरि औषधि दियो मलाई त भगवान नै आए जस्तो लाग्यो’ पञ्चेश्वर गाउँपालिका १ का स्थानिय ७० वर्षिय हरी सिह घटालले खुसि हुदै भने । शिविरमा पाठेघर खसेका महिलाहरुको उपचार, नाक कान घाटी, दन्त सेवा, जनरल फिजिसियन सेवा प्रदान गरिएको थियो । स्वास्थ्य सेवाको पहँचवाट टाढा रहेका यी स्थानीय तहमा विना शुल्क यति ठुला रोगको उपचार गराउन पाएकोमा शिविरमा आएका स्थानीय खुसि व्यक्त गरिरहेका थिए । हामी
२०७५ जेष्ठ २७, आईतवार १२:४३२०७५ जेष्ठ २७, आईतवार १२:४३२०७५ जेष्ठ २७, आईतवार १२:४३ by Sidharekha Online
सर्पले टोक्दा के गर्ने ? के नगर्ने ?
गर्मी महिनामा सर्पदंशका घटना निकै बढ्छन्। खासगरी नेपालको तराईं भेगमा सर्पदंशका घटना बढी हुन्छन्। अमेरिकामा हरेक वर्ष ८ हजार मानिसहरु सर्पले टोकेर अस्पताल पुग्छन्। तीमध्ये ५ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। अधिकांश अवस्थामा सर्पदंश खतरनाक हुन्छन्। सर्पले टोकेको स्थानमा पीडा हुने, सुन्निने हुनुका साथै तन्तुहरुलाई क्षति पु¥याउँछन्। यसका साथै आन्तरिक रक्तस्राब पनि गराउँछन्। अमेरिकी चिकित्सकले सर्पले टोक्दा के गर्ने र के नगर्न भन्ने विषयमा केही सल्लाह दिएका छन्। के गर्ने ? तत्काल इमर्जेन्सीमा गइहाल्नुपर्छ। टोकेको त्यति विषालु नभएपनि टिटानस र केही गम्भीर ब्याक्टेरियल संक्रमणको खतरा हुनसक्छ। सकेसम्म टोकेको स्थानलाई अलि अलि भएपनि चलाउनुपर्छ, यसले विष अलि ढिलो फैलन मद्धत गर्छ। सर्प कस्तो थियो भन्ने पनि याद गर्नुहोला। यसले चिकित्सकलाई उपचारमा सहयोग पुग्नेछ। सकेसम्म कुन स्थानमा टोकेको थियो भनेर